Stroke – Healthy Life Journal
All posts tagged "Stroke"
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက် ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်သလဲ…
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါက သွေးတိုးရောဂါနဲ့တွဲနေရင်၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အဆီများတာနဲ့တွဲနေရင်၊ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊...
မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်သည် လေဖြတ်ခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်
———၊ zko ၊——— မဂ္ဂနီဆီယမ်ပေါများစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အခွံမာသီးနဲ့ ပဲသီးတွေကို စားတာက လေဖြတ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ လူနှစ်သိန်းခွဲကို လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်တာကာလက အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဥရောပနိုင်ငံနဲ့ အာရှဒေသနိုင်ငံတွေရှိ လူဦးရေ...
အမျိုးသမီးတို့၏ လေဖြတ်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေသည့် အချက်ငါးရပ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နှစ်စဉ် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီး ခြောက်သောင်းလောက်က လေဖြတ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ လေဖြတ်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေက အန္တရာယ်ပိုများပြီး သေဆုံးနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသားကော အမျိုးသမီးပါ လေဖြတ်နိုင်ခြေ များတဲ့အချက်တွေက သွေးတိုးတာ၊ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောများတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ...
လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို လိုက်နာတာက လေမဖြတ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေဟာ နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ သွေးဖိအားကို ထိန်းသိမ်းပါ လေဖြတ်ခြင်းကင်းဝေးအောင် သင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကတော့...
လေဖြတ်ထားသော အမျိုးသားတို့ တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ပါက အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်ခြေပိုများ
——–၊ ကိုထက် ၊——– တစ်ဦးတည်းနေထိုင်တဲ့ လေဖြတ်ထားသူ အမျိုးသားတွေက တခြားလူနာတွေထက် လူ့သက်တမ်းမစေ့ခင် သေဆုံးနိုင်ခြေ သိသိသာသာ ပိုများကြောင်း ဆွီဒင်အနောက်ပိုင်းရှိ လေဖြတ်လူနာ ၁၀၉၀ ဦးအား လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ “တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သူတွေဟာ ကျန်းမာတဲ့ဘဝမှာ နေထိုင်နှုန်းနည်းပြီး ဆေးဝါးမှီဝဲမှုကလည်း...
လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊—— Q. လေသင်တုန်းဖြတ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ။ A. လေသင်တုန်းဖြတ်တယ်ဆိုတာ လေဖြတ်တာ (Stroke)ကို အရပ်ထဲမှာ ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အရပ်ထဲမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုက လေဖြန်းတာပါ။ ဒါက...
——၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—— လေဖြတ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ထိခိုက်သွားတာကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် လေဖြတ်မှာကို ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ လေဖြတ်မှာ ကြောက်သူတွေအနေနဲ့ လေဖြတ်နိုင်ခြေ လျော့ကျစေဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) ခရမ်းချဉ်သီးစားပါ...
လေဖြတ်ခြင်း မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်နည်းများ
ငွေကြယ်စင်ယံ လူတိုင်း ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို လေဖြတ်ဝေဒနာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဖြတ်တဲ့ဝေဒနာ မဖြစ်စေဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုပါတယ်။ အစားအသောက်ကို သေချာရွေးချယ် စားသောက်ပါ အစားအသောက်နဲ့ သရေစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ ရွေးချယ်စားသောက်တာကြောင့် လေဖြတ်ဝေဒနာမရအောင် ရှောင်လွှဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို...
ရိုးစင်းသော နည်းလမ်းငါးရပ်ကို လိုက်နာရုံဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် လေဖြတ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်
ZKO ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပြီး သွယ်လျစွာ နေထိုင်ခြင်း၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားခြင်း၊ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း၊ အရက်မသောက်ရမနေနိုင်ရင် အသင့်အတင့်ပဲ သောက်သုံးခြင်း စတဲ့ရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ နည်းလမ်းငါးရပ်လိုက်နာခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ လေဖြတ်နိုင်ခြေကို ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ...